करण जोहरको मल्टिस्टारर फिल्म 'तख्त' को पहिलो झलक - Nepali Headlines,Nepal News, Nepali News, News Nepal
करण जोहरको मल्टिस्टारर फिल्म ‘तख्त’ को पहिलो झलक
बलिउड निर्देशक करण जोहरले अब उनको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्म ‘तख्त’को पहिलो झलक सार्वजनिक गरेका छन। इन्स्टाग्राममा सार्वजनिक गरिएको भिडियोमा एक तख्त (सिट) देख्न सकिन्छ, र ब्याकग्राउन्डमा विक्की कौशल र रणवीर सिंहको आवाज सुनाइएको छ।
फिल्म मल्टीस्टारर हुनेछ। रणवीर सिंह, विक्की कौशल, करिना कपूर खान, भूमि पेडनेकर, आलिया भट्, जाहन्वी कपूर र अनिल कपूर फिल्ममा देखिनेछन्। फिल्मको सुटिङ यहि मार्चबाट सुरु हुनेछ। र फिल्म २०२१ को २४ डिसेम्बरमा रिलिज हुनेछ।
यसको कहानी भारतको मुगल समयको घटनाक्रममा आधारित छ। त्यसैले यसमा आबद्ध कलाकारले उर्दु भाषा सिक्न सुरु गरेका छन्।
Previousपहिलो भेटमै आकर्षित हुनुभएन ? कतै तपाई डेमीसेक्सुअल त होइन?
Nextशरीरमा भिटामिन डीको कमी भएको ५ संकेत